Abdifatah S. Faamo April 27 , 2008 Sannadkii 1982 ayaa baahi loo qabo in la helo xal waara iyo wada shaqeyn darteed Jamciyadda Qaruumaha ka Dhexeysa (The United Nations/UN) ku kalliftay in ay qabanqaabiso shirweyne albaabada u furanyihiin dalalka adduunka oo dhan, in ay uga hadlaan habkii ay si wadajir ah uga manaafacaadi lahaayeen Badaha Adduunka. Iyada oo UN-ta ay aqoonsantahay madaxbannaanida dhul-badeedka (Territorial Sea) dowladaha xeebta leh oo dhan iyo weliba rabitaankooda Xeer kala haga xuduudahooda badeed ayaa lama huraan noqotay in dib-u-sixid lagu sameeyo Xeerkii Badda ee Geneva 1958 iyo 1960 ba.
Maxamed sheha oo ah baxri u dhahshy dalka Kenya, oo ciil la ilmeynaya ka dib markii qafaalasho 3 bilood ah loogu haystay xeebaha Soomaaliya, October 22, 2005.
Hantida laga suubiyo qafaalashada maraakiibta ku gooshta xeebaha Soomaaliya waxaa laga dareemi karaa magaalooyinka dalka. Budhcadda waxay si xushmad leh ugu dhexnooshahay dalka, iyadoo weliba meelaha qaarkiis ay yihiin ganacsadayaasha ugu firfircoon ama ah dadka talada degaanka wax laga weeydiiyo. Sida la sheegayo, waxay budhcaddaasi gacan saar hoose la leeyihiin maamullada ka jira dalka
DFKS Maxay ka qabatay Budhcad Badeedka? Casumaad ay Topcat Marine Security u samaysay Mudane C/lahi Yusuf iyo Marwadiisa Xaawo C. Samatar.
Dowladda Federalka ee Ku-meel-gaarka Soomaliyeed oo la soo doortay dhammaadkii 2004 ayaa waxay u muuqatay bilowgii in ay daneeneyso in laga hortago budhcadnimada, diyaarna u yahay maamulkooda in wada shaqeyn iyo gargaarba weydiisan doonta Caalamka sidii loo soo afjari lahaa qafaalashada maraakibta iyo badmaaxda saaran ba
Waxaa ayaandarro ah in muddo ka dib ay soo baxday in shirkaddan Topcat, oo sheegatay in xaruunteedu tahay New York aysan ahayn hay’ad gudan kartaa waxa ay ballan qaaday. Hay’addu ma awooddo in ay u soo dirto Soomaaliya doonyaha dheereeya, tababarto ciidanka la dagaalkan budhcadda, iyo dhismaha saldhigyo ama xaruumo dalka gudihiisa ah. Waxaa intaasi dheer in maareeyaha (executive) shirkaddaas, Peter Casini, uu leeyahay taariikh caddeyneysa in uu shirkad abuuro, mudo yar ka dibna uu xiro oo uu file-gareeyo waxa loo yaqaan “kicid” (bankruptcy). Bal eeg sooyaalkiisa abaabul shirkadeed : 1992 – Peter Casini wuxuu abuuray shirkadda Cobra Marine Industries (New Jersy-based), la xirayna 1995, isagoo sheegtay “kicid”.
Si kastabo ha ahaatee, markii ay ka soo wareegatay in ka badan hal sano waqtigii heshiiska lala galey Topcat ayaa hadal ku saabsan shirkadda ka soo yeerey wasiirkii Kalluumeysiga Xasan Abshir Faarax. Xasan oo qiil uu doondoonaya labada dhinacba ayaa yiri: State Department Mareykanka ayaa ka xannibay (blocked) shirkadda Topcat in ciidan iyo qalab militari oo lagu ilaaliyo u soo dirto xeebaha Soomaaliyeed, sababta oo ah iyadoo weli dalka uu saaran yahay xannibaadii UN–ta (UN embargo). Wuxuuna hadalkiisa raaciyey in hadda ay dowladdiisa wada hadal kula jirto dowladda Shiinaha iyo shirkado dalkaasi ka socda oo buuxiya howsha la dagaalanka budhcad badeedka  Ilaa maanta lama xaqiijin karo in ayba marka hore shirkaddaasi ay biloowday shaqadii ay u ballan qaaday dowladda DFKS, kuna hanatay ugu yaraan dacaayad ama xayeeysiin magaceeda (publicity). Budhcad badeekiina weli si xawli ah ayuu ku socdaa, oo haddadaan aynu joogno maraakiib ayaa afduub loogu heysto xeebaha dalkeenna. Haddii ay Dowladdii Dhexe ee federaalka ahayd ay sidaa wax yeeshay, bal aynu u leexanno dhinaca Maamul Goboleedka Puntland waxa ay ka qabatay la dagaalanka dadka qafaasha maraakiibta
Budhcad Badeedka Qiil Ma Leeyahay? Qaar ka mid ah tobankii budhcad badeedda ahaa ee xeebaha Puntland uu Mareykanka ka soo qabtay oo maxkamad ku taalla Mombasa la hor keennay, February 03, 2006. Inta aanan ka jawaabin su’aashaa kore, bal aynu xusno taariikhda soo jireenka ah ee waqooyi bari, haddana loo yaqaan Puntland. Juquraafi ahaan waa meel aad taariikh ugu leh maraakiibta iyo badmaaxdaba, siiba inta u dhaxeysa Cape Guardafui (Ras Casir) iyo Xaafuun. Soonaha (Zone) u dhaxeeya Guardafui iyo Xaafuun waa meel leh “Wareegto” (whirlpool) sida Bermuda triangle ayeeyna badanaa qatar u tahay. Waa meel ay maraakiib iyo doonyo farabadan ku halligmeen, baxaari aan tiro lahaynna ku naf waayey.
Mar uu booqday xeebta Xaafuun nin Mareykan ah, oo Khadiva-dii Egypt (Ismaaciil Pasha) u soo diray in uu sahan ku suubiyo (survey) xeebaha Soomaaliyeed, ayaa wuxuu ku arkay wax uu la yaabay Guardafui. Ninkaasi Mareykanka ah oo la yiraahdo Charles Graves ayaa soo weriyey in buur u dhow Guardafui la saaray Sheekh maalin iyo habeen walba ku barya (tukado) in “Ilaahay uu u soo caariyo maraakiibta gaalada si ay u bililiqeystaan” . Ilaa laga soo gaaro sannadkii 1928, cirifkaa ay ku kulmaan biyaha Badda Cas (Red Sea) iyo tan Indian Ocean-ka waxay u ahayd maraakiibta meel ay ku halligmaan. Odeygii Fasciste-ha ahaa ee u talinayey dalka Talyaaniga, gumeysiga xunna ku haystay dalkeenna, Mussolini, ayaa wuxuu go’aansaday in uu ka dhiso cirifkaasi Manaarad (Lighthouse) uga diga maraakiibta qatarta ku soo fool leh. Suldaanka cirifkaasi Guardafui ka talinayey iyo dadkii bililaqada maraakiibta soo caarisaa ka faa’iideysan jiray ayaa isku dayey in ay hakiyaan dhismaha Manaaradda. Dowladda Talyaaniga waxay ku xalisay arrintu in ay Suldaanka siiso magdhow ah 300, 000 lire una balan qaaday in sannad walba ku siin doonto Ilaalinta Manaaradda 40, 000 lire .
Octobar 1, 2000 – waxa madaxweyne C/lahi Yusuf uu ballaariyey hadafkii shirkadda Hart Group, lana galay heshiis kale. Wuxuu Hart Group u ansixyey in ay ka kalluumeystaan xeebaha Puntland, shirkaddana ay la timid 9 markab (nooc trawler ah). Heshiiskaasi oo ka dhacay hotel-ka Haruuse (Bosaso) ee uu deganaa madaxweynaha, maalin Axad (Oct 1, 2000)
Waxaa taasi ay kuu caddeynaysaa in damicii Hart Group uu sii kordhay ama ayba ujeedadeeda ugu weynba ay ahayd in ay ka kalluumeysato xeebaha ganiga ah ee Puntland. Walow shirkadda ay heysato saxiixa madaxweynaha, weli lama horgeyn oo ma ansixin Puntland parliament iyo Golihii Issimada oo dastuurku qabo in ay yihiin awoodda ugu sarreeysa Puntland. Arrintan ayaa sabab u ahayd in hugun-siyaasadeed oo liddi ku ah madaxweynaha iyo shirkaddaba uu bilowdo sannadkii 2001. Waxaa kale jabay dowladdii, dad badan oo aad ugu dhawaa, isku beelna ka soo jeedeen, madaxweynahana waxay bilaabeen olole ay ku doonayaan in doorasho la qabto si ay u nasiyaan madaxweynaha iyo shirkadda Hart Group ba. Waa tan aynu kawada dharegsannahay dagaalkii sokeeye ee ka dhashay arrintan, dad badanna ay ku dhinteen iska horimaadyadii military ee dhacay. Dagaalkaasi oo ugu dambeyntii uu C/lahi Yusuf ku guuleystay ayaa waxaa la wada ogyahay qeybta libaax ay ka qaadatay shirkadda Hart Group – ha noqoto xag dhaqaale ama ciidan, oo shaqaalaheeda ilaalada ahaa ay la safteen C/lahi Yusuf. Guuleysashada Cabdullaahina ay u noqotay guul shirkadda u soo hoyatay, oo waxay meeshoodii ka sii wateen ka kalluumeysiga xeebaha dihan ee Puntland
Haba ka kalluumeysatee xeebaha Puntland, bal aan is weydiinno maxay ka qabatay arrinta ah budhcadbadeedka? Sidaan korba ku soo xusnay, ciidankii shirkadda oo loogu tala galey in ay budhcadda la dagaalamaan, waxay ku mashquuleen difaacidda siyaasadda C/lahi Yusuf, taas oo ay ku kasbatay Puntland in hay’ado badan oo Caalami ah ay ku tilmaamaan “Xeebaha ugu qatarsan Soomaaliya”, xitaa ka xun xeebta Xarardheere oo ku caan baxday qafaalashada maraakiibta . Taa micnaheedu wuxuu yahay, sidey shirkaddan Hart Group u timid ba waxaa ku soo kordhay xeebaheennii qafaalashada maraakiibta. Budhcad badeedkan tirada badan xageey ka yimaadeen? Ma odhaneyno waxa maraakiibta qafaashaa waa isla ilaalada shirkadda u shaqeeyaa, laakiin waa su’aal u baahan in jawaab loo helo. Ma shirkadda ayaa dhiirigelisoo oo dooneysa sidaasi, iyada oo ay ka tahay shaqo-abuur? Mise Maamulka Puntland ayaa u arkay qafaalashada arrin ah “lucrative business” lagu sii sotedheereysto saldannada ama haynta hoggaanka Puntland?
Badmaaxyadii markabkii laga lahaa Taiwan ee Ching Fong Hwa, ee la sii daayey, November 14, 2007.
Al Ameer – Markabkani oo laga lahaa Shaariqa (Sharjah, UAE) wuxuu xamuul u siday Muqdisho iyo Kismayo. Xeebta Eyl ayaana laga qafaashay. Arrinta markabkan ayaa waxaa sii deyntiisa ka qeyb qaatay safiirka Somalia ee UAE, Xuseen Maxamed Bullaaleh. Markabka oo la heystay muddo yar, waxaa la sii daayey July 11, 2002, iyadoo mulkiilaha markabka laga qaatay madaxfurasho dhan $100,000. Panaghia Tinou – markabkan waxaa laga qafaashay xeebta u dhow Bosaso June 15, 2002. Waxaa la sii daayey markabkaasi July 3, 2002, ka dib markii laga qaatay $400,000 oo madax furasho ah.
Golden Nori – oo ahaa markab tanker ah, laga leeyahayna Japan, sideyna shidaal, ayaa Oct 25, 2007 laga afduubtay xeebaha Puntland, lana keenay xeebta magaalada Bosaso. Sidoo kale markabkan oo la heysatay muddo bil iyo bar, ayaa lagu furtay lacag madaxfurasho ah oo qiyaastii lagu sheegay ilaa $500,000 Akhristayaal, idinka oo raalli ka ah maqaalkan dheer, waxaan kor idiin ku soo magacaabay oo keliya 9 markab oo xeebaheenna laga afduubtay sanooyinkii hore, aniga oo aan soo magaacibin maraakiibta faraha badan ee ka kalluumeysata xeebaheenna oo la qafaashay. Sababta aan saas u yeelayna ay tahay, iyada oo aalaaba maraakiibtan kalluumeysiga ay sharciyan ku xad gudbaan Xeerka Caalamiga, oo diidaya in si xatooya ah loogu xadgudbo xeebaha dalkeenna. Bal wax xoogaa ila fiiriya, afduubka sannadkan 2008 horrantiisa aynu ku jirno ka dhacay xeebta Eyl.
Gunaanad: budhcadnimo cawaaqib xumadeeda xun filo Bal Yaa weydiiya Cadde waxa ay Al-Habeeb ka qabato xeebaha Puntland. Waxa ay shirkadaasi ay qandaraas ku haysataa ilaalinta xeebaha & la dagaalanka Budhcad badeedka ! Waxa aan ognahay in dagaalkii sokeeyee ee burburiyey dowladdii dhexe ee dalka ka jirtay uu si xawli ah uu biloowday January 1991. Laga bilaabo 1991 ilaa aasaasiddii maamulka Puntland ee 1998, ay fara ku tiris ahayd maraakiibta lagu afduubtay xeebaha Puntland. Laakiin marka ay meeshii maamul dhexe yeelatay oo ay xitaa timid shirkad (Hart Group ama al-Habeeb–ta hadda) iska sheegta in ay ilaaliso xeebta, ayaa korodhay afduubashada maraakiibta. Taasi oo isoo xasuusisay dhaqaalihii laga suubin jiray maraakiibta soo caarisay bililiqadoodii, ayna meherad (profession) ka dhigan jireen dad badan ee noolaa qarniyadii hore (1700s, 1800s) – illamaa ay gaartay in la isku dayo in saldanado laga dhisto
Hadda waxeynu ku noolnahay adduun uu ka dhexeeyo wada shaqeyn, oo dadka meel kasto ay joogaan waxay yeesheen ama nolol maalmeedkoodu ku xiran yahay wax meel fog uga yimaada ama u dhoofiya. Dalkeenna Soomaaliya haba ugu darnaadee. Wax ka yar miyaa jira “cirbad”? Waxaan ka keensannaa dibadda, oo maraakiib ayeey ku timaadaa cirbaddu. Adduunkii baaba iska xaafad yar noqday. Marka ma dhici karto in badaheenna ay dad yar ku qafaashaan maraakiib iyo shaqaale ajnabi ah, kana suubsadaan hanti, adduunkana aanan ka filin jawaab-celin ciqaab wadataa. Filo in dalkeenna lagu soo rogo cunaqabateyn (embargo), maraakiibta imaneysana lagu qaaliyeeyo insurance-ka, iyo wax la mid ah. Waa jirtaa in hadda Puntland dad ay ka dhisteen Hotel-lo waaweyn, diyaaraado ka gatay, guryo badan ka dhistay waxa la xiriiraa meheraddan budhcad badeedka. Laakiin waa wax la isaga daba imanayo, oo sida Muqdisho ba hadda ay wax isu badaleen ayeey noqon meel walba
Xigasho [reference]  The United Nations Convention on the Law of the Sea states: Part II, Article 3 & 17: Subject to this Convention, Coastal States exercise sovereignty over their territorial sea which they have the right to establish its breadth up to a limit not to exceed 12 nautical miles; and all foreign vessels enjoy the right of “innocent passage” through those waters. PART VII, Article 100: All States shall co-operate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State.  See The Indian Ocean Newsletter, Business Intelligence Section, December 3, 2005.  See Associated Press News dated March 7, 2007.  See, WAYNE K. DURRILL, The American Historical Review, Vol. 91, No. 2. 5] Charles Graves to Chichi Graves [his wife], May 22, 1878, University of North Carolina Library, Chapel Hill, Southern Historical Collection, Charles I. Graves Papers. “…in 1878 an American visitor among the Majeerteen reported: “A priest is stationed in the mountains near Cape Guardafui who prays day and night that God will drive Christian vessels ashore that they may plunder them! This was told me by the Chief of Hunda who regarded it as a very prudent, proper and pious precaution—he thinking I was a Moslem.”
 See New York Times Apr 20, 1924, pg S8.  See Lloyd’s List News, dated Jan I, 2003: “the worst area for piracy off the Somali coast is in the north-eastern region of the country in the region known as Puntland, which has unilaterally declared independence.”  See AllAfrica News dated Feb 26, 2007: Puntland ocean resources minister, Saed Mohammed Raage, has told Shabelle by phone that regional government forces would use their military power to release the hijacked ship. "We will not negotiate with the hijackers. We will use our force to free the ship," he said  See All Africa News, dated Feb 05, 2008: He said “their group's name is the Ocean Salvation Corps, and they are a group of Somali nationalists who took it upon themselves to protect the country's shores." Also see:
http://www.biyokulule.com/view_content.php?articleid=924 A.S. Faamo
* The author writes the Zoming into the Past articles for Biyokulule.com and this article was part of that series. He can be reached at: roobdoon2000@yahoo.ca